Mogadishu Journal » Maxaa Ugu Weeynaa Soomaaliya Sanadkii Tagay Ee 2012ka.
(mjournal):Sanadkii 2012ka ayaa Soomaaliya waxaa ka dhacay isbeddello waaweyn oo muhiim u ahaa nolosha bulshada, kuwaas oo lahaa dhinacyo kala duwan.
Soomaaliya oo muddo 12 sano ah ay maamulayeen dowlado kumeel gaar ah ayaa sanadkan sii dhammaanaya waxay yeelatay nidaam rasmi ah, iyadoo magaalada Muqdisho ishii Augusto lagu ansixiyay dastuur cusub, laguna dhisay baarlamaanka Soomaaliya iyo hay’adaha kale ee dowladda, waxaana caasimadda lagu doortay 10kii bishii september madaxweynaha Soomaaliya oo 6dii bishi october soo magacaabay raysul wasaare soo dhisay xukuumad rasmi ah.
Shirar caalami ahaa oo arrimaha Soomaaliya looga hadlay oo ka kala dhacay dalalka Britain iyo Turkey horraantii sanadka ayaa gogol xaar u noqday inay Soomaaliya ka baxdo nidaamka kumeel gaarka ahaa, wuxuuna caalamku ku muujiyay shirarkaas sida ay uga go’an tahay isbeddel nabadeed iyo mid siyaasadeed oo ka dhaca Soomaaliya.
Wafdi ka kala socday dowladdii kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ayaa markii ugu horreysay bishii June si fool-ka-fool ah isku soo horfariistay, iyagoo ku kulmay magaalada London, kana wada-hadalay mustaqbalkooda, waxayna u ballameen iskaashi dhinacyo kala duwan leh iyo in la sii wado wada-hadallada.
Al-Shabaab ayaa sanadka 2012 laga saaray inta badan magaalooyin koonfurta Soomaaliya oo ay ku sugnaayeen muddo sanado ah, waxaana meelaha laga qabsaday ka mid ah: magaalooyinka Kismaayo, Jowhar, Marka, Baydhabo, Afgooye iyo kuwo kale.
Sanadkan sii dhamaanayo waxaa lagu tilmaamay inuu yahay sanadkii la dilay weriyeyaashii Soomaaliyeed ee ugu badnaa, waxaa gudaha dalka lagu dilay 18 weriye iyo shaqaale warbaahineed.
Sanadkan wuxuu noqday sanadkii dadkii Soomaaliyeed ee ugu badnaa ay ku noqdeen dalka, tan iyo intii ay socdeen dagaalladii sokeeye, iyagoo ka billaabay mashaariic isugu jira maalgashi iyo dib-u-dhis.